May 16, 2019· MUTARE, Zimbabwe—Zimbabwe’s rural communities are beginning to stand up to Chinese companies operating in the country, as evidenced by the recent demonstrations against plans for a mining project in the Domboshava area, north of the capital Harare. Villagers in Domboshava have been sending petitions to the government and holding protests against the quarry mine proposed by China
Chinese-owned Anjin diamond mine in Chiadzwa Mbare Times
Zimbabwe: Chinese Mine, Workers' Wage allAfrica
A Chinese coal mining company with claims in Hwange has come under fire from workers who have accused the firm of exploiting them without pay. Zimbabwe: Chinese Mine, Workers' Wage Dispute Turns
Zimbabwe Govt permits Chinese companies to drill for. 08/09/2020· THE Zimbabwe government has awarded two coal mining concessions to Chinese companies inside the Hwange National Park which is the country’s flagship wildlife conservation area and home to one of the largest populations of elephant remaining in Africa..
Chinese companies wreak havoc in Zimbabwe The
China has been pouring money into Zimbabwe for many years now investing in cement, platinum, agriculture, mining, steel and of late the lucrative diamond sector. Last year, trade between China and Zimbabwe topped $1, 1 billion.
May 14, 2019· A view of the Domboshava area in Zimbabwe where a Chinese company wants to put a quarry mine. (Courtesy Columbus Mavhunga) China Aihua Jianye maintains the $5 million mining project would generate